Unxantathu webhlogi: Izinto ezi-3 zeMpumelelo | Martech Zone
Unxantathu weBlogging: Izinto ezi-3 zeMpumelelo
Lwesine, Matshi 8, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Kudala ndisebenza intetho yam kwiBlogging Blog kule veki. Inkqubo ye- ingxoxo yencwadi namhlanje ngokubhekisele kwabeMveli Bomthonyama ngokwenene ibangele umdla wam kunye neengcinga zam malunga nokuba ngowuphi umxholo wam. Nangona ndiza kuxoxa ngoncedo kunye nokungalunganga kweBlogging yeShishini, ulindelo lwam luya kuba kukuba uninzi lwabantu apho luya kufuna ukubhloga. Andifuni ukuthetha nabo ngayo nayiphi na indlela, ke ndingathanda ukuvusa umdla wabo. Ndibonisa I-Triangle yeBlogging: Izinto ezi-3 zeBlogging ephumelelayo.
Nangona itekhnoloji iyeyona iphakathi, njengoko ixesha lihamba ngokubhloja amaqonga ayabekwa emgangathweni kunye netekhnoloji esisiseko. Ndicinga ukuba izinto zebhlog ephumeleleyo zezi zilandelayo:
umxholo - Esi sisiseko ibhlog yakho eyakhiwe kuso. Ingxoxo engaguquguqukiyo, evulekileyo, evulekileyo kwaye enengcinga ngezihloko onqwenela ukuzenza.
uwuthanda - Ndiyakholelwa ukuba uthando luyosulela. Ukuba awuyithandi ibhlog yakho, okanye ngokubhala imathiriyeli yakho, abafundi bakho baya kubona ngawe kwaye bashiye… ngokukhawuleza.
Momentum -Ibhlog ayikhuli ngokungena kube kanye. Ifuna umfutho wokuhlangabezana nokudlula kulindelo lwabafundi bakho kunye nokutsala abafundi abatsha.
Isimboli sedangatye simele ilangatye ukuba umxholo wakho, uthando kunye namandla ziya kubangela! [Hlaziya] Idangatye limele ingxoxo eqala ngabafundi bakho ngamagqabantshintshi kunye nokulandela umkhondo- ukwenza ubudlelwane kunye nabafundi bakho kunye nokusasaza igama lakho.
Okungakumbi okuzayo… ndingathanda ukuva izimvo zakho Unxantathu weBlogging. Zive ukhululekile ukusebenzisa umfanekiso kwaye uxoxe kunye nabafundi bakho. Ndijonge impendulo yakho!
Kwaye ndenze lo Mzekeliso ndedwa nge-Illustrator! Inkqubo ye- Ibhokisi encinci iingcebiso zihlawula!
Ilula kakhulu, uCaveman angayenza…
Yintoni ukungathathi cala?
Mar 9, 2007 ngo-12: 27 AM
Ndingaba nomdla kwindlela oza kuyichitha ngayo # 1 - Umxholo.
Kananjalo lo mxholo (kunye nokubonisa / ukufomatha) uguqulela njani kwi-RSS feed
Mar 9, 2007 ngo-9: 16 AM
Molo Steven! Eyona nto iyinyani-uyilo ludlala indima enkulu. Ndibhalile malunga noko kancinci kwibhlog kodwa andinyanisekanga ayiyongcali kangako kuloo ndawo njengendawo enje Uyilo lwewebhu olusempilweni.
Bekufanele ukuba ndibhale kancinci malunga nabaphulaphuli… kule meko aba ngabaphathi abakwizinga eliphezulu kunye neengcali ezizimeleyo kwingingqi abanokucinga ngebhlog yebhizinisi.
Mar 9, 2007 ngo-1: 19 AM
Ndicinga ukuba ngomxholo kufuneka ube unolwazi ngesihloko kunye nezixhobo zokufumana inkuthazo. Ukuba uza kugcina ukungqinelana okuyimfuneko, kuya kufuneka usoloko unemibono, engekho lula.
Ndigcina uluhlu lwezithuba ekungafuneki ndizenze kwangoko kula maxesha xa ndingakwaziyo ukuza nantoni na. Kuyanceda ukugcina izinto zihamba, nokuba andizibhali kwangaphambili isithuba ngokwaso. Ukuba nesihloko sokubhala malunga nokunceda.
Mar 9, 2007 ngo-9: 23 AM
Ndiyavuma kwaye ndiyayithanda incam yakho! Ndihlala ndinezifundo ezigcinwe kuyilo endiyaziyo ukuba ndifuna ukubhloga ngakumbi. Inceda ngomfutho!
Mar 9, 2007 ngo-3: 50 AM
Ke iinjongo zebhlog kukubetha indawo eseleyo kanye embindini kanxantathu, ndicinga ukuba yiyo loo nto uzitsale ezo zinto zikunxantathu akunjalo?
Mar 9, 2007 ngo-9: 19 AM
Ewe kunjalo ngenene… ukugxila kwezi ndawo zintathu kuko okutyhala impumelelo kwibhlog yakho. Enye yezinto eziphambili endizama ukufikelela kuzo ebantwini kukuba ukubhala ibhlog ayisiyonto-mbini. Ukufumana umxholo kunye nomnqweno akwanele- kukho umda wexesha olandelayo oza kuyidinga ukwakha umfutho.
Enkosi ngale ngxelo (kuye wonke umntu). Umbono wakho uyanceda!
Mar 9, 2007 ngo-9: 52 AM
Uthande umfanekiso. Uthando # 2 ngakumbi- la pasión es MUY contagiosa.
Mar 9, 2007 ngo-10: 37 AM
Ndicinga ukuba umxholo yeyona nto ibalulekileyo. Yonke inkcazo yemizuzu oyibonisa abantu iya kubonisa into onakho ukuyenza. Ukukhetha isihloko esifanelekileyo ngexesha elifanelekileyo kunokuba luncedo.
Mar 9, 2007 ngo-11: 00 AM
Ndiyawathanda amagama entengiso kaGoogle. Kukonxantathu wakho wokucinga, ucebisa ukuba:
Paris Hilton > Imifanekiso, Iphepha lodonga, Ukuhleba kweVidiyo, iiBlogs, iiFanfare
Inomdla… (okt: lol)
Mar 9, 2007 ngo 6:07 PM
Ndihlaziye umzobo ukuze ilangatye likhangeleke ngathi ayililo 'uzilo lwelobster'.
Jul 18, 2007 ngo-6: 10 AM
Thanda unxantathu kunye nale posi ... iphefumlelwe iposti yanamhlanje.